Cunnida cuntada fudud oo lala xiriiriyey dhalmo yari - BBC News Somali
Haweenka badanaa cuna cunnooyinka fudud ee aan cunin khudaarta ayaa daraasad la sameeyey lagu ogaaday inay dhibtoodan xilliga dhalmada.
Daraasadan oo lagu sameeyey haween gaaraya 5,598 ayaa lagu ogaaday in dumarka cuna cunnooyinka fudud sida jibsiga ay ku qaadanayso isbuucyo iyo bilooyin inay uur qaadan marka la barbardhigo haweenka aan cunin cunnooyinkaas.
Khubarada ayaa sheegaya in haddii la cuno cunooyin isku dheelitiran oo nafaqo leh ay badanayaan fursadaha dhalmada.
Hase yeeshee daraasaddan ayaa haweenka ku dhiiragelinaysa inay ogaadan cunooyinka ay cunayaan ka hor inta aysan uurka qaadin
Haweenka ku nool Australia, New Zealand, UK iyo Ireland ayaa lagu sameeyey baaritaan lagu ogaanaya cunnooyinka ay cunaan bil ka hor inta aysan uurka yeelan.
Umulisooyinka ayaa booqday haweenkan markii ay ahaayeen 14-16 isbuuc, iyagoo weydiiyey dumarka inta mar oo ay cunaan qudaarta iyo inta mar oo ay cuneen cunnooyinka fudud.
Cilmi baarayaasha ayaa sheegay in dumarka cuna qudaarta badan ay ka fiicanyihiin saddex jibaarka kuwa cuna qadaar yar.
Waxaa kale oo la ogaaday in dumarka cuna qudaar aan badnayn ay khatar ugu jiraan 12% inay uur qaadin sanadkii ,iyadoo 16% oo ka mid ah dumarka cuna cunnooyinka fudud ay ku qaadanayso inay uur qaadan.
Waxaan weli la sameynin daraasad lagu eegayo cunnooyinka ay ragga badanaa cunaan ,iyadoo laga yaabo inay jiraan sababaha kale ee aan la ogayn ee saameeyey baaritaankan, sida ay cilmi baarayaasha sheegeen.
Khubarada ayaa sidoo kale sheegaya in cunooyinka ay dumarka cunaan xilliga ay uurka leeyihiin ay saameyn ku yeelanayso marka ay dhalayaan.
Dr Gino Pecoraro, oo wax ka dhiga jaamacadda Queensland oo aan ka qeyb qaadanin daraasadan ayaa yiri "daraasadan ayaa diiradda saaraysa caafimaadka haweenka ,cunnooyinka wanaagsan waxay u fiican yihiin lamaanaha doonaya inay dhalaan carruur".